စိတ်ကူးယဉ် // ဒေါက်တာခင်မောင်ညို // | The Ladies
Home » စိတ်ကူးယဉ် // ဒေါက်တာခင်မောင်ညို //
စိတ်ကူးယဉ် // ဒေါက်တာခင်မောင်ညို //
ကျွန်တော့်စာပေမိတ်ဆွေတစ်ယောက် စိတ်ကူးယဉ်ဂျာနယ်လေးတစ်စောင် ထုတ်တယ်။ သူတွေးချင်တာကိုတွေးပြီး သူရေးချင်တာကို ရေးတယ်။
`စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ထဲမှာပဲ နှစ်သိမ့်နေတာ ကောင်းပါသေးတယ်ကွယ်´ ဆိုတဲ့ ငယ်ငယ်ကဆိုဖူးတဲ့ သီချင်းကို သတိရတယ်။ အမှန်တော့ စိတ်ကူးယဉ်ဆိုတဲ့ စကားကို နောက်ပိုင်းမှာ မသုံးကြပေမဲ့ အိပ်မက်ကိုတော့ လူတွေ အတော်သုံးကြတယ်။ အိပ်မက်ကို သုံးရတာလည်း မာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာကြောင့်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။
မာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာဟာ အမေရိကန်လူမျိုး လူမည်းခေါင်းဆောင်ပါပဲ။ သူဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆုကိုလည်း ရခဲ့ပါတယ်။ သူက အကြမ်းမဖက်ရေး ဆန္ဒပြခဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ဆန္ဒပြတာတွေဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးကို ပျက်စီးစေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆန္ဒပြတာတွေကို အားမပေးဘူး။ (ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေက စိတ်ကူးယဉ်ဂျာနယ် ထုတ်တာနေမှာပေါ့)
ဒါပေမဲ့ မာတင်လူသာကင်း လူမည်းအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ ဒီဆန္ဒပြမှုဟာ လိုအပ်တဲ့ အရာတစ်ခုလို့ မြင်ခဲ့တယ်။ သဘောပေါက်အောင် ပြောရမယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေတဲ့ အာဖရိကတိုက်သားတွေပါ။ သူတို့ကို အာဖရိက တိုက်ကနေ တိရစ္ဆာန်တွေလို ဖမ်းပြီး ကုန်ပစ္စည်း ကျွဲနွားတွေလို အရောင်းအ၀ယ် ခံခဲ့ရတဲ့ လူမည်းတွေပါ။ လူမည်းတွေဟာ လူတွေပါပဲ။ ဆိုလိုတာက သူတို့မှာ တော်သူတွေ၊ ညံ့သူတွေ၊ ကောင်းသူတွေ၊ ဆိုးသူတွေ ရှိမှာပါပဲ။ ဒီလူမည်းတွေကို ၁၆ ယောက်မြောက် အမေရိကန်သမ္မတ အီဗရာဟင်လင်ကွန်းက ကျွန်အဖြစ်ကနေ ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်အဖြစ်မှ ကင်းလွတ်ပြီး အနှစ်တစ်ရာ ကြာသွားပေမဲ့ လူမည်းတွေဟာ ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရဆဲပါပဲ။ သူတို့ဟာ လူဖြူတွေနဲ့ တန်းတူရည်တူ ကားမစီးရ၊ အစားမစားရ၊ ကျောင်းမနေရ ဆိုတဲ့ ခွဲခြားမှုတွေ ခံနေရတယ်။ ဒါကို မာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာတို့က ဆန္ဒပြတာပါ။
တစ်မြို့ဝင်တစ်မြို့ထွက် ဆန္ဒပြတယ်၊ အဖမ်းခံရတယ်။ ထောင်ကျကြတယ်၊ အရိုက်ခံရတယ်။ သေသူတွေလည်း ရှိတယ်။ သူတို့ မတုံ့ပြန်ဘူး။ အမြို့မြို့မှာ ဆန္ဒပြတယ်။ နောက်ဆုံး လူဖြူတွေရဲ့ စာနာမှုကို ရရှိလာတယ်။ အထူးသဖြင့် ၀ါရှင်တန်ဒီစီ လင်ကွန်းရဲ့ ရုပ်တုရှေ့မှာ မာတင်လူသာကင်း မိန့်ခွန်းဟာ ပြည်သူတွေကို Heart ထိသွားစေခဲ့တယ်။ သူ ဘာကိုမှ မတောင်းဆိုပါဘူး။ သူက ကျွန်တော့်မှာ အိပ်မက်လေးတစ်ခု ရှိတယ်။ (I haveadream) ဆိုတာကို ပြောသွားတာပါပဲ။
ဒီအကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်း မှတ်တမ်းတင်ထားတာ ရှိတယ်။
`၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ကပေါ့။ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ လင်ကွန်းရုပ်တုရှေ့ လှေခါးခုံပေါ်မှာ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ မာတင်လူသာကင်း ဂျူနီယာရဲ့ရှေ့မှာ ပရိသတ် နှစ်သိန်းကျော်ရှိနေတယ်။ သူဟာ သမိုင်းတွင်စေတဲ့ ကျွန်တော့်မှာ အိပ်မက်တစ်ခု ရှိတယ်ဆိုတဲ့ မိန့်ခွန်းကို ပြောကြားပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အကြီးဆုံးသော ဆန္ဒပြပွဲပါပဲ။ ဒီကနေရတဲ့ ရလဒ်ကတော့ ၁၉၆၄ ပြည်သူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေ (the Civil Rights Act of 1964) နဲ့ 1965 မဲပေးပိုင်ခွင့်ဥပဒေ (the Voting Rights Act of 1965) တို့ကို ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ခြင်းပါပဲ´
စိတ်ကူးတွေ အိပ်မက်တွေဟာ လူတွေရဲ့ဆန္ဒပါပဲ။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူး။ မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာပဲ ရှိသတဲ့။ ဒါဟာ အလွန်အကျွံပြောတဲ့ စကားတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ ဆန္ဒရှိရင်တော့ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ အထူးသဖြင့် အများကောင်းစားစေတဲ့ ဆန္ဒတွေနဲ့ မတရားတာတွေ ပြေပျောက်အောင် လုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေဟာ တစ်နေ့မှာ ပြည့်လာတာကို တွေ့နိုင်တယ်။ လူတွေဟာ မကောင်းတာတွေနဲ့ ဒုက္ခခံနေရတာတွေ အများကြီးပါပဲ။ ဒီလို ဒုက္ခ ငရဲတွေကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ။
စောဦးပိုင်းကတည်းက ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ ပုံပြင်လေးတစ်ခုရှိတယ်။ ခရစ်ယာန်ပုံပြင်လေးပါပဲ။ တစ်ခါက လူငယ်လေး တစ်ယောက် ရှိသတဲ့။
သူဟာ ထာဝရဘုရားကို မယုံဘူး။ ထာဝရဘုရားဟာ လူတွေလုပ်ကြံ ဖန်တီးထားတာပါဆိုပြီး ပြောလေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့မိဘတွေကတော့ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းရိုသေသူတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် လူငယ်လေးကို ဘုရားကျောင်းကို အမြဲတစေ သွားစေခဲ့တယ်။
မိဘကို မလွန်ဆန်နိုင်လို့ ဘုရားကျောင်းကို သွားပေမဲ့ အဲဒီရောက်တဲ့အခါ `ဘုရားမရှိဘူး၊ ရှိတယ်လို့ ငါမယုံဘူး´ ဆိုပြီး ပြောလေ့ရှိသတဲ့။ တစ်နေ့မှာ သူတစ်ယောက်တည်း ဘုရားကျောင်းထဲမှာ ထိုင်နေတုန်း `ဘုရားမရှိဘူး။ ရှိတယ်လို့ ငါမယုံဘူး။ ငရဲမရှိဘူး။ နတ်ပြည်ဆိုတာလည်း မရှိဘူး´ လို့ အော်ပြောနေမိတယ်။
သူဟာ တစ်ယောက်တည်း အကြိမ်ကြိမ်ပြောနေတော့ ဘုရားသခင်ဟာ မနေနိုင်တော့ဘဲ သူ့ဆီရောက်လာလေသတဲ့။ ဘုရားသခင်က သူ့ကိုပြောတယ်။
`သားတော် ဘုရားရှိတာကို မယုံဘူးဆို။ ငါဘုရားသခင်ပဲ´ လို့ ဆိုတယ်။ ဒီအခါ လူငယ်လေးက -
`ဒါဆို ငရဲနဲ့ နတ်ပြည်ဆိုတာကော ရှိတာပေါ့ ဟုတ်လား´ လို့ မေးလိုက်တယ်။
`ရှိတယ်´ လို့ ပြောတယ်။
`ဒါဆို တပည့်တော်ကို လိုက်ပို့ပါ´ ဆိုပြီး တောင်းဆိုတယ်။
ဘုရားသခင်လည်း လူငယ်လေးကို ခေါ်ဆောင်သွားလေသတဲ့။
တစ်နေရာရောက်တော့ လူတွေဟာ အများကြီး အော်ဟစ်နေတာကို တွေ့သတဲ့။ နံရိုးပြိုင်းပြိုင်းနဲ့ လူတွေကိုတွေ့တော့ ဒါဟာ ငရဲမှန်းသိလိုက်တယ်။ အနားရောက်တော့ အဲဒီလူတွေက ဆာလိုက်တာ၊ ဆာလိုက်တာဆိုပြီး အော်နေကြသတဲ့။ အဲဒီလူတွေက အော်နေပေမဲ့ သူတို့အနားမှာ အသားတွေ အရွက်တွေကို ထည့်ပြုတ်ထားတဲ့ ဟင်းအိုးတစ်အိုးကို တွေ့သတဲ့။ လူငယ်လေးက -
`သူတို့ ဘာလို့ အော်နေတာလဲ၊ သူတို့ မစားကြဘူးလား´ လို့ ဘုရားသခင်ကို မေးတယ်။
စဉ်းစားကြည့်လေ၊ ဒီလူတွေရဲ့ဘေးမှာ ဇွန်းတွေလည်း ရှိတယ်။ ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ဟင်းအိုးကြီးလည်း ရှိတယ်။
ဒီအချိန်မှာပဲ လူတစ်ယောက်ဟာ ကျွန်တော် ဆာတယ်ဆိုပြီး ထသွားကာ ဇွန်းတစ်ခုကိုယူတယ်။ ပြီးတော့ သူဟာ အသားတုံးတွေကို ခပ်ယူသတဲ့။ အသားတုံးတွေကိုရတော့ သူ့ပါးစပ်ထဲ ထည့်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုမှ ထည့်လို့မရဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့လက်ဟာ မကွေးနိုင်လို့ပါပဲ။
`တမလွန်က လူတွေမှာ တံတောင်ဆစ်ကွေးမပါဘူး´
တံတောင်ဆစ်မပါတော့ သူတို့ဟာ ဟင်းခပ်ထားတဲ့ ဇွန်းကို ပါးစပ်နားရောက်အောင် ဘယ်လိုယူလို့ရမလဲ။
လူငယ်လေးဟာ `ဆိုးလိုက်တာ´ လို့ ညည်းတွားပြီး ဘုရားသခင်ကို နတ်ပြည်ကိုပို့ဖို့ပြောသတဲ့။ ဘုရားသခင်လည်း လူငယ်လေးကို နတ်ပြည်ခေါ်သွားသတဲ့။ နတ်ပြည်ရောက်တော့ လူတွေဟာ ပျော်ရွှင်နေကြတာကို တွေ့တယ်။ သူတို့ဟာ ၀၀လင်လင် စားသောက်နေကြရဟန် တူတယ်။ သူတို့အနားမှာ ငရဲပြည်ကလိုပဲ အသားတွေ အရွက်တွေကို ထည့်ပြုတ်ထားတဲ့ ဟင်းအိုးတစ်အိုးကို တွေ့သတဲ့။ လူငယ်လေးက ဘုရားသခင်ကို ပြုံးပြီးပြောလိုက်တယ်။
`အရှင်ဘုရား၊ ငရဲကလူတွေနဲ့ ဒီကလူတွေ မတူဘူးနော်။ သူတို့တစ်တွေက ၀၀လင်လင်ရှိကြတယ်´
`အရှင်က သူတို့က တံတောင်ဆစ်ကွေးတွေ ဖန်တီးပေးထားတာပေါ့ ဟုတ်လား´
`မဟုတ်ဘူး ချစ်သား။ တမလွန်မှာ ဘယ်သူမှ တံတောင်ဆစ်ကွေး မပါဘူး။ ငရဲကလူဖြစ်ဖြစ်၊ နတ်ပြည်ကလူဖြစ်ဖြစ် အားလုံး အတူတူပဲ´
`ဟင်၊ ဒါဆို သူတို့ ဘယ်လိုစားလဲ´
လူငယ်လေးကြည့်နေတုန်းမှာပဲ လူတစ်ယောက်က ပြောတယ်။
`ကျွန်တော် ဆာတယ်၊ ကျွန်တော် ဆာတယ်´
ဒီအခါ သူ့ဘေးနားက လူတစ်ယောက်က
`မင်း ဆာတယ် ဟုတ်လား´
`ဒီမှာထိုင်´ လို့ နေရာပေးပြီး ထသွားတယ်။ ထသွားတဲ့သူဟာ ဇွန်းတစ်ချောင်းကို ကောက်ယူလိုက်ပြီး အသားတုံးတွေကို ခပ်ယူသတဲ့။ အသားတုံးတွေကို ရတော့ သူ့ပါးစပ်ထဲ ထည့်ဖို့မကြိုးစားဘူး။ စောစောက ဆာတယ်လို့ ပြောတဲ့ လူအနားကိုသွားတယ်။
`ဒါဆို ဒီမှာ ကျွန်တော် ခပ်လာတာတွေစားပါ´ ဆိုပြီး ခွံကျွေးတယ်။
တကယ်တော့ တံတောင်ဆစ်မကွေးပါတဲ့။ လူတွေဟာ ဟင်းကိုခပ်ပြီး သူ့ပါးစပ်ထဲကိုသူ ဘယ်လိုမှ ထည့်လို့မရဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူများပါးစပ်ထဲကိုတော့ ထည့်ပေးလို့ရတယ်။ ကိုယ်ဆာတဲ့အခါ သူကျွေးတယ်။ သူဆာတဲ့အခါ ကိုယ်ကျွေးတယ်။ အားလုံး ၀ ကြတယ်။ ဒါဟာ ချမ်းမြေ့တဲ့နေရာပေါ့။ နတ်ပြည်ချမ်းသာဆိုတာ ဒီလိုနေရာပဲလေ။
ဒါကြောင့် ကိုယ်ရသမျှ ကိုယ့်ပါးစပ်ထဲကို ထည့်ချင်းသူတွေက ငရဲကိုရောက်နေကြသူတွေနဲ့ တူတယ်။ သူများကို ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက်နေတဲ့သူတွေက နတ်ပြည်ချမ်းသာကို ခံစားနေရသူတွေနဲ့ တူတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ပြောရရင် `စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်´ ဆိုတာ အရေးပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဆရာက ပြောဖူးပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ပြောတာပါ။
`Dream, dream, dream. If you do not have any dream, how could your dream comes true?
အိပ်မက်တွေ မက်ကြပါ။ အိပ်မက်လေးမှ မမက်ကြရင် မင်းအိပ်မက် ဘယ်လို အကောင်အထည်ပေါ်လာနိုင်မလဲ´ တဲ့။
ကောင်းသောအိပ်မက်များ မက်နိုင်ကြကာ စိတ်ကူးထားသမျှတွေကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ကြပါစေ။